Nagu saabsan - Zhoushan Willman Machinery Technology Co., Ltd.
Zhoushan willman technology mishiino Co., Ltd. waa ganacsi soo saarid xirfadeed ee qalabka tec-sare, isku daraa cilmi-baarista iyo horumarinta, design, soo-saarka, iibinta iyo adeegga. Waxaa nalagu sifeeyay cuntada qasacadaysan iyo cabitaanka qasacadaha qasacadaysan iyo mashiinka qiyaasta dareeraha nitrogen oo ay ku jiraan mashiinka cabbitaanka dareeraha aseptic iyo mashiinka ogaanshaha alaabada cuntada sida hubinta faaruqinta, hubinta booska madaxa ect.
Kooxdayada xirfadda leh ayaa ku siin doonta adeeg xirfadeed oo ay ku jiraan naqshadeynta qaabeynta. U hoggaansanaanta keydinta tamarta, keydinta shaqaalaha, iyo kordhinta awoodda, waxaan fiiro gaar ah siineynaa tayada alaabtayada aan soo saarno.
Willman Makiinado waa soo saare mashiinno cunto iyo cabitaan gasacadeysan oo xirfad leh oo la aasaasay 2014 iyada oo hadafkeedu yahay in lagu bixiyo mashiinnada ugu wanaagsan warshadaha cuntada qiimayaal tartan ah. Shirkaddayadu waxay ku bilaabatay mashiinka qaadashada LN2 iyo alaabooyinka kale ee la dhammaystiray ee ogaanshaha ama mashiinnada kormeerka.
Anigoo u heellan R&D iyo hal -abuurnimada shirkadda, waxaan ku guuleysanay hoos -u -dhac cusub oo waxaan gaarsiinnay badeecadaha kale ee mashiinnada wax -soo -saarka cuntada oo ku saleysan waayo -aragnimadayada hodanka ah ee warshadaha cuntada.
Alaabtayada oo ay ku jiraan mashiinka wax lagu ogaado. Iyada oo ay ugu wacan tahay baahida sare ee suuqa ee alaabada ku jirta shelf, mashiinka ogaanshaha wuxuu siiyaa macaamiisha 'ogaansho deg -deg ah oo sax ah si loo siiyo dammaanad tayada alaabta macaamiisha.
Cuntada qasacadaysan iyo cabbitaanka cabbitaanka iyo kala-tolidda, mashiinka ka-hor-marinta cuntada sida maydhashada, mahcine ect.
Ku darida hal mashiin oo keli ah, shirkaddu waxay kaloo siisaa macaamiisheenna xalka wax -soo -saarka oo dhan.
Abuuritaanka mashiinno cusub ama cusbooneysiinta mashiinnada kor u qaadista iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha, waxaan ka kasbannay sumcad wanaagsan macaamiisheena.
Shirkadda Willman Makiinadaha waxaa ka go'an inay soo saarto mashiin tayo leh oo ay siiso macmiil kasta baakidh dhammaystiran oo ku qanacsan inkasta oo horumarkeenna joogtada ah xagga wax -soo -saarka iyo maaraynta.
Waxaan aaminsanahay in hal -abuurnimadu ay fure u tahay guushayada. Iyada oo loo marayo ballanqaad adag oo ku aaddan cilmi -baarista iyo horumarinta, waxaan macaamiisheena siineynaa xalal horumarsan oo kordhiya awoodda wax -soo -saarka, hagaajinaya daacadnimada culeyska iyo yareynta kharashaadka hawlgalka.
Waxaan hiigsaneynaa inaan siino heer sare wax walba oo aan sameyno annagoo dhiseyna xiriir adag oo waara oo aan la yeelano macaamiisheena.
Waxay sifeysay alaabtaydii hore waxayna si joogto ah u abuureen kuwo cusub si ay uga faa'iidaystaan ​​teknoolojiyadda kobcaysa si ay ula kulmaan baahiyaha macaamiisheena ee mar walba isbedelaya.